Nhau, 26 Ndira 2013
Mugovera 26 Ndira 2013
Ndira 25, 2013
America Yopa Zimbabwe $95M Gore Rino yeKurwisa HIV/AIDS
America inoti gore rino ichapa Zimbabwe mamiriyoni makumi mapfumbamwe nechidimu emadhora kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kurwisana nedambudziko reHIV/AIDS.
Dare reparamende rave kutarisirwa kuti rizeye nyaya yebumbiro idzva renyika kwemazuva maviri musvondo rechipiri rakukadzi bumbiro iri risati raendeswa kureferendamu.
Mutungamiri weMavambo Kusile Dawn, kana kuti MKD, VaSimba Makoni, vanoti komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika yeCOPAC inofanira kubuditsa gwaro rezvakabvumiranwa nevatungamiri vemapato ari muhurumende.
Vapepeti veNhau mu Africa Voshanyira Zimbabwe
Masachigaro emasangano evapepeti venhau muAfrica ari muZimbabwe kuzosimbisa hukama nesangano ravapepeti venhau vemuno reZimbabwe National Editors Forum
Vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika ari muhurumende yemubatanidzwa vari kutarisirwa kusaina mukupera kwemwedzi waKukadzi gwaro rekuzvibata rinotarisirwa kunge richiteverwa nenhengo dzavo mukurwisana nemhirizhonga
VaMugabe naVaTsvangirai Votarisirwa Kutaura Svondo Rinouya Pachaitwa Referendamu
Nzendo dzekunze kwenyika dziri kuitwa nemutungamiri , VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, dzava kupa kuti nyaya yekukurukura zuva rekuita referendamu imbomiswa.
Ambassador Wharton Vokurudzira Hurumende Kusaomesera Masangano Akazvimirira
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, VaBruce Wharton, vanoti zvakakosha kuti masangano anoshanda azvimirira aregwe achiita basa rawo kana achishanda zviri pamutemo nekuti masangano aya anoita basa rakakosha zvikuru.
AU Yokurudzirwa Kuudza VaMugabe Kuti Vagadzirise Zvinhu
Masangano akazvimirira oga emunyika nekunze ari muAddis Ababa, ku Ethiopia kumusangano weAfrican Union wakatanga neMuvhuro kuti akurudzire vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti vaone kuti zvinhu zvavandudzwa muZimbabwe musati maitwa sarudzo.
Zanu PF iri kutarisirwa kusangana nemusi weChina muHarare kuti inzwe pasvika hurongwa hwekunyorwa kwebumbiro idzva kubva kune vanga vachimirira bato iri muhurongwa hwekunyorwa kwebumbiro uhwu
Ndira 21, 2013
VaObama Vanotora Mhiko yeKutungamira America kweMamwe Makore Mana
Mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, vatora mhiko neMuvhuro yekutonga America kwemamwe makore mana.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti ivo nevamwe vavo vari munyaya dzezvematongerwo enyika vanofanira kukurudzira runyararo munyika musarudzo dzichaitwa senzira yekuremekedza mutevedzeri wavo, Va John Landa Nkomo, avo varadzikwa pamarinda emagamba muHarare.
Ndira 18, 2013
Vatungamiri veNyika Votarisirwa Kutara Zuva reReferendamu
Vatungamiri venyika vari kutarisirwa kusangana svondo rinouya kuti vazeye nyaya yekuti referendamu yoitwa riinhi sezvo neChina pakawiriranwa pane zvose zvainetsa.